အမေရိကန်အလုပ်သမားဈေးကွက် ဒေတာကို ဒီဇင်ဘာ ၈ရက် ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါသည်. ယခုဒေတာသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွှေးပွဲရက်မတိုင်မီ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်မည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်သည်. ယခုဒေတာသည် ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွှေးပွဲတွင် အတိုးနှုန်းတင်မတင်နှင့် အနာဂတ်မူဝါဒများ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အလွန်အရေးပါသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်သည်.
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အလုပ်သမားများအတွက် လုပ်ခလစာပေးချေမှု အခြေအနေပြ ဒေတာ NFPဒေတာသည် ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းတင်ရာတွင် အရေးပါသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒေတာအားကောင်းပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ USDကို တန်ဖိုးမြင့်တက်စေမှာပဲဖြစ်ပါသည်. ဒေတာအားမကောင်းပါက ဒေါ်လာတန်ဖိုးကျဆင်းနိုင်ပါသည်.